MW CMC, Xaflada Qalinjabinta Dufcada 9, aad iyo 9ka Rijmint - Cakaara News
MW CMC, Xaflada Qalinjabinta Dufcada 9, aad iyo 9ka Rijmint
Jigjiga(CN) Isniin, 25ka January 2016, madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa maanta kaqaybgalay xaflada qalinjabinta dufcada 9,aad oo ay dugsiga tababarada ciidanka gaarka ah ee Shaalaqe Mahad Soofe kaga qalinjabiyeen 9 rijminti.
Xafladan qalinjabinta ciidanka gaarka ah ee dufcada 9, aad ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas’uuliyiinta ugu saraysa xukuumada oo aan ukala hadhin iyadoo uu ugu horeeyo madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar, madaxwayne kuxigeenada,golaha kabineega, gudiga fulinta, golaha dhexe, mas’uuliyiin kasocotay ciidanka difaaca qaranka ee koonfur-bari, ciidanka federaalka, janaraalka guud ee ciidanka gaarka ah, shaqaalaha heerarkooda kaladuwan ee xafiisyada heer deegaan, culimo-awdiinka, hooyooyinka, dhalinyarada, shacabka magaalada jigjiga iyo marti sharaf kale.
Hadaba, ciidankan tababartay ayaa goobo kaladuwan oo dugsiga kamid ah kusoo bandhigay dhoolo-tus, xeelado, tababaro iyo taktikyo dagaal oo layaab leh oo aan inaba caadi ahayn. Waxaana kamid ahaa: xeeladaha dagaalka maalin iyo habeenba loola galo ubbo, al-qushaash IWM iyagoo caawinaya shacabka ay dhibaatada ugaysteen ubbo iyo alqushaash, noocyada tababarada kaladuwan ee fuulida buuraha, gur-guuradka, boodida, weerarida, qabashada, difaaca, toogta, ridida hubka culus iyo daawaynta intaba.
Kadibna, waxaa iyagoo salaan sharafeed kaqaadanaya madaxwaynaha iyo mas’uuliyiinta ugu saraysa ciidanka socod geedakacayaar ah kumaray goobta dhamaan 9kii regiment ee qalinjabiyay oo ay weheliso kooxdii baambayda oo utumaysay.
Waxaa intaa dheer, in madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo uu weheliyo janaraalka guud ee ciidanka gaarka ah mudane Cabdiraxmaan C/laahi Buraale ayaa abaal-marino gudoonsiiyay xafiisyadii sida wayn uga qaybqaatay xiligii ciidanku tababarka uu kujiray. Waxaana kamid ahaa: madaxwayne kuxigeenka ahna wasiirka waxbarashada DDSSI mudane Mowliid Haayir Xasan, wasiirka xafiiska biyaha, macdanta iyo tamarta marwo Fartuun Cabdi Mahdi, gudoomiyaha golaha sare ee arimaha islaamka mudane Sheekh Cabdiraxmaan Xasan Xuseen, ciidanka difaaca qaranka qaybta koonfur bari, ciidanka federalka ah iyo marwo jamiila oo horay u ahayd mas’uul katirsan ciidanka difaaca qaranka oo deeq kuraas 120 ah iyo lacagba ugu deeqday dugsiyada hoyga ee deegaaanka.
Waxaana halkaa lagu dhaariyay dhamaan ciidankii dufcada 9,aad ee qalinjabiyay inay dalkooda, dadkooda iyo diintoodaba iyagoo kudhaqmaya dastuurka iyo sharciga ay si daacad ah oo kago’naansho leh ugu shaqeeyaan.
Ugudanbayna, madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa khudbad uu kula dar-daarmay ciidanka halkaa kasoo jeediyay isagoo usheegay: inay xusuusnaadaan inay yihiin midhihii kadhashay ilmadii shacabka, natiijadii iyo guulihii ciidankii kahoreeyay, inay noqdaan kabaha iyo u adeegayaasha shacabka, inay yeeshaan kala amarqaadasho iyo kala danbayn asluubaysan, inay kusifoobaan anshax iyo akhlaaq wanaagsan ee ciidanimo, inay ilaaliyaan xuquuqda aadamaha guud ahaan iyagoo si gaar ah u ilaalinaya xuquuqda haweenka, caruurta, waayeelka iyo shacabka qaybihiisa nugul, inay kudhaqmaan ilaalinta dastuurka dalka, deegaanka iyo xeerarka boolisnimo kuna dhaqmaan sharciga oo kaliya, inay sii xoojiyaan isjacaylka iyo is-gargaarka ciidanka dhexdiisa iskulana halgantaan si cad-cadaani kujirto, iyo inay waliba sii xoojiyaan caawinta shacabka sida taageeradii ciidanku ufidiyeen shacabkii abaaraysnaa ee gobolka sitti.
Madaxwaynaha ayaana Alle uga baryay in ilaahay naxariis waasac ah siiyo janatul fardawsana kawaraabiyo dhamaan mujaahidiintii ushihiiday naftoodana u hurtay iyagoo difaacaya amaanka iyo xasiloonida shacabka iyo wanaaga dhinac walba leh ee aan maanta kunaaloonayno. Wuxuuna uduceeyay ciidanka gaarka ah dhamaantii.